तपाईं अब मोलिस्टार टिभीलाई भाँडामा लिन सक्नुहुनेछ कुनै पनि टेलिफ्निका ग्राहक नभई। | आईफोन समाचार
तपाईं अब मोलिस्टार टिभीलाई भाँडामा लिन सक्नुहुनेछ कुनै पनि टेलिफ्निका ग्राहक नभई।
Telefónica केही महीना अघि हामीलाई यसको भिडियो प्लेटफर्म घोषणा गर्‍यो Movistar + लाइट y पहिले नै एक वास्तविकता छ। स्पेनिश टेलिकम्युनिकेसन विशालले महसुस गरिसकेको छ कि नेटफ्लिक्स वा एचबीओ जस्ता बाँकी ओटीटी डिजिटल टिभी सेवाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उसले आफ्नो दर्ता सामान्य जनतामा खोल्नुपर्‍यो, र यो गरिसकेको छ।
अन्त्यमा, तपाईले अबदेखि एक Telefónica ग्राहक हुनु आवश्यक छैन यसको अडियोभिजुअल प्लेटफर्म मात्र अनुबंध गर्न सक्षम हुन। अब तपाइँ एक महिनामा आठ यूरो को लागी तपाइँको आईफोन वा आईप्याडमा मोभिस्टारको टेलिभिजन प्रोग्रामिंग हेर्न सक्नुहुन्छ।
2 सबैको लागि
3 मोबाइल लाइन समावेश छ
5 छवि गुणस्तर
6 डाउनलोड गर्नुहोस् र पछि हेर्दै
7 आईपैड र आईफोन, हो। एप्पल टिभी, होईन
8 खाता साझा गर्नुहोस्
योसँग प्रतिस्पर्धाको तुलनामा धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्य छ। एक महिनामा आठ यूरो को लागी, तपाईंसँग पूरा सामग्री प्लेटफर्म छ। स्थायित्व बिना, एक महिनाको नि: शुल्क परीक्षण अवधिको साथ, र साथै, एक मोबाइल लाइन समावेश सहित मूल्य मा।
जो कोहीले मोभिसार + लाइट भाँडामा लिन सक्छन्। अब यसको टेलिभिजन प्लेटफर्मको मज्जा लिन यसको टेलिफोनी सेवाहरूको साथ टेलिफोन ग्राहक बन्नु आवश्यक पर्दैन।
मोबाइल लाइन समावेश छ
मोभिस्टारले टेलिफोन अपरेटर भएको फाइदा लिन्छ, र बाँकी अनलाइन टेलिभिजन प्लेटफर्महरूबाट अलग रहन्छ शुल्कमा एक मोबाइल लाइन सहित, जुन तपाइँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं यसलाई दर्ता गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं मूभिस्टार स्टोरमा जानु पर्छ जहाँ उनीहरूले तपाईंलाई सम्बन्धित सिम कार्ड र मोबाइल नम्बर दिन्छन्। सेवाको मूल्यहरू अद्भुत छैनन्, तर तपाईं यसलाई अतिरिक्त रेखाको रूपमा पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि यसले कुनै निश्चित मासिक लागतलाई संकेत गर्दैन।
कल लागत ० सेन्ट / मिनेट हो, तर सावधान, एक संग Cent० प्रतिशत कल स्थापना। प्रत्येक एसएमएस को लागी एक भारी c० सेन्ट लागत, यद्यपि इमान्दारीपूर्वक, के कोही आज कल एसएमएस पठाउँछन्? यो ध्यान दिनु पर्छ तपाईंसँग नि: शुल्क डाटाको एकल मेगा छैन। तपाईं सक्नुहुन्छ c सेन्ट / एमबीको लागतमा ब्राउज गर्नुहोस्, पहिलो १3०० एमबी। एक पटक सीमा नाघ्यो भने, तपाई कुनै कम लागतमा कम गतिको ब्राउजि continue जारी राख्न सक्नुहुनेछ।
स्पष्ट रूपमा, तपाईंले मोभिसार + लाइटबाट सदस्यता समाप्त गरेकै क्षण तपाईंले लाइन गुमाउनुभयो।
तपाईं धेरै श्रृंखलाहरू र चलचित्र सामग्री हेर्न सक्नुहुनेछ जुन प्लेटफर्मले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ, पहिलो दर फुटबलको बाहेक। यदि तपाईं लिग वा च्याम्पियन्स लिग हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं निश्चित टेलिफोन ग्राहक हुनुपर्दछ र तिनीहरूको टिभी भाँडामा लिनुपर्दछ यसको सम्बन्धित डिकोडरको साथ। यदि तपाईं फुटबल फ्यान हुनुहुन्न र के तपाईंलाई रुचि श्रृंखलाहरू र फिल्महरू तपाईंको आईफोन वा आईप्याडमा हेर्नका लागि हो भने यो एक उत्तम विकल्प हो। तपाईंसँग सबै प्रोग्रामिंगहरू छन् च्यानलहरू ० ० र # भमोस, मोभिसार श्रृंखला, श्रृंखलामाना, फक्स, टीएनटी, हास्य केन्द्रिय र एएमसी। तपाईंसँग बोर गर्न VOD (माग गरिएको भिडियो) छ: series०० श्रृंखला र वृत्तचित्रहरू, लगभग films०० फिल्म र divers० विविध कार्यक्रमहरू।
त्यहाँ उपकरणमा निर्भर दुई भिन्न रिजोलुसनहरू छन्: आईप्याडका लागि, एचडी (p२० पी) र आईफोनका लागि एसडी (720 576p)। योसँग यसको तर्क छ: फोनहरूको लागि छवि क्वालिटी कम डाटा र मेमोरीको कम खपतको लागि कम गरिएको छ यदि तपाईं पहिले आफ्नो उपकरणमा सामग्री डाउनलोड गर्नुभएको छ भने।
डाउनलोड गर्नुहोस् र पछि हेर्दै
हो, पक्कै पनि। यदि तपाईं डाटा उपभोगको समस्याको साथ अनलाइन सामग्री हेर्न चाहनुहुन्न भने यदि तपाईं 3G जी / G जी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंसँग WIFI जडान भएको बेला तपाईं धेरै जसो प्रोग्रामिंग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछपछि हेर्नका लागि। तपाईंले सामग्री पट्टिमा डाउनलोड आइकन देखा पर्दछ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्दछ। श्रृंखला को मामला मा, आइकन प्रत्येक एपिसोड को ट्याब मा छ। सिनेमा, श्रृंखला, आदि को प्रत्येक ट्याब भित्र, तपाईं अर्को एक called डाउनलोड गर्न called भनिन्छ, र त्यहाँ तपाईं पूरा सूची अफलाइन उपलब्ध पाउनुहुनेछ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाइँ अनुप्रयोग सत्र बन्द गर्नुहुन्छ वा यसलाई मेटाउनुहुन्छ भने, तपाइँको उपकरणबाट डाउनलोड गरिएको सामग्री हराउनेछ। तपाईंले कुनै डाउनलोड गरेको भिडियो हेर्न सुरू गरेपछि, यो स्वचालित रूपमा hours 48 घण्टा पछि मेटिनेछ।
आईपैड र आईफोन, हो। एप्पल टिभी, होईन
को लागी उपलब्ध आईप्याड र आईफोन, तर यो एप्पल टिभीको लागि किन होईन भनेर बुझिएको छैन। एउटा कारण यो हुन सक्छ कि मोभिस्टारले यो प्लेटफर्मको खपत केवल मोबाइल उपकरणहरूमा केन्द्रित गर्न चाहेको थियो, सट्टामा, यसले अनुप्रयोग विकास गरेको छ। दुबै स्मार्टटीभी टेलिभिजनहरू (सामसु,, एलजी र एन्ड्रोइड टिभी) को साथसाथै अमेजन फायर टिभी स्टिक र चाँडै नै क्रोमकास्टका लागि। हामी सोच्न सक्छौं कि यो एप्पल हो जसले यसको अर्को सामग्री प्लेटफर्म रक्षा गर्न चाहन्छ, अर्कोतर्फ, यदि यसमा स्पेनका सबै अवस्थित प्लेटफर्महरूको अनुप्रयोगहरू छन् भने (नेटफ्लिक्स, एचबीओ, अमेजन प्राइम, राकुटेन टिभी, आदि)। तसर्थ, कुनै पनि यो कारण छैन। यसको कुनै तर्क छैन।
खाता साझा गर्नुहोस्
Movistar + लाइट एकै साथ दुई उपकरणहरूमा प्ले गर्न सकिन्छ। म यो त्यहाँ छोड्छु।
Movistar + लाइट एक राम्रो विकल्प हो ल्यान्डलाईनमा सदस्यता लिए बिना मोभिसारको आफ्नै सामग्रीहरू (फुटबल बिना) हेर्न सक्षम हुन। € / / महिनाको लागि, नि: शुल्क मोबाइल फोन लाइनको साथ, र खाता साझा गर्न को क्षमता। स्थायित्व बिना। आईप्याड वा आईफोनमा हेर्नको लागि उत्तम छ. एप्पल टिभीका लागि उपलब्ध छैन। यसको सीमित रिजोलुसन दिएपछि यसलाई ठूलो टिभीहरूमा प्रयोग गर्न उचित हुँदैन। यो उत्कृष्ट छवि गुणवत्ता र रिजोलुसनसँग तुलना गर्न सकिदैन जुन अमेजन प्राइम वा नेटफ्लिक्स तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » तपाईं अब मोलिस्टार टिभीलाई भाँडामा लिन सक्नुहुनेछ कुनै पनि टेलिफ्निका ग्राहक नभई।
एक महिना ढिलो, तर राम्रो लेख
Rakuten TV सँग एप्पल टिभीको लागि अनुप्रयोग छैन, र हामी हौं; न त आकाश
Gerxam लाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पल को लागी Q3 को नतिजा हो। सेवाहरू एक सबै समय उच्च मा पुग्छ